Sweden oo soo saartay Sharciyo Cusub Goobaha Maqaayadaha oo la xirayo 20:30 pm ugu danbeyn Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaSweden oo soo saartay Sharciyo Cusub Goobaha Maqaayadaha oo la xirayo 20:30 pm ugu danbeyn
February 25, 2021 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden 1
Dowladda ayaa maanta ku dhawaaqday dhowr go’aan oo cusub si loo xakameeyo faafitaanka cudurka Corona ee dalka.
Raiisel wasaare Stefan Leuven ayaa ku sheegay , shir jaraa’id oo uu maanta qabtay, in go’aanada ay ka mid yihiin in loo ogolaado Hay’adda Caafimaadka Dadweynaha inay u dejiso saacadaha shaqada gudaha ama qaran ahaan dhammaan maqaayadaha, baararka iyo Goobaha Kafeyga laga cabo, adkaynta tirada ugu badan ee dadka ku jiri kara dukaamada iyo goobaha jimicsiga, iyo u oggolaanshaha saraakiisha xakamaynta infekshinka inay go’aannada lagama maarmaanka ah ay gaari karaan gobollada sida xiritaanka howlaha ganacsiga haddii loo baahdo.
Agaasimaha Guud ee Hay’adda Caafimaadka Dadweynaha, Johann Carlson, ayaa ku dhawaaqay ujeeddada hay’adda in la xiro dhammaan maqaayadaha, goobaha kafeyga laga cabo iyo baararka 8:30 fiidnimo, iyada oo aan loo eegin haddii ay bixiyaan cabitaanno aalkolo ah iyo in kale, si loo yareeyo cudurka.
Carlson wuxuu kaloo ku dhawaaqay adkeynta tirada ugu badan ee soo booqda dukaamada, xarumaha ganacsiga iyo jimicsiyada. Wuxuu ka codsaday xarumaha dukaamaysiga inay u oggolaadaan hal qof oo ka tirsan kooxda ama qoyska inuu galo dukaamaysiga. Oo aan loo oggolaan koox dad ah inay dukaamaysi wada aadaan.
“Waxaan u baahanahay inaan kordhino u hogaansanaanta sharciyada,” ayuu yiri Carlson. Waxaanan yareyneynaa tirada ugu badan ee dadka ku nagaan kara dukaamada. Wax ka badan hal qof oo qoyska ka mid ah waa inuusan aadin dukaameysiga. Waxaan sidoo kale badali karnaa haddii loo oggol yahay in laga cunteeyo maqaayadaha iyo in kale.
Go’aamada cusub waa in la fuliyaa laga bilaabo kowda bisha Maarso ee soo socota ilaa ogeysiis dheeri ah.
Dowladu waxay mamnuucday in laga cunteeyo maqaayadaha iyo baararka wixii ka dambeeya 8-da fiidnimo, halka maqaayadaha iyo baararka ay awoodaan inay sii shaqeeyaan 8-da wixii ka dambeeya, ayadoon khamri la siinin Haddana Maamulka Caafimaadka ayaa raba inuu xiro dhammaan makhaayadaha iyo goobaha kafeyga ugu dambeyn 20.30.
Mahdi Diriye says:
waxaan racaeynaa awamiirta wazaarada c/fimaadka waan mid lagu qasban yahay in aan fulino waxaana ku jira xaaladeena c/fimaad.
Dhab ahaantii bulshada waxa loo shegayo haddii ey fuliyaan waxaa yaraanaya xanuunka fafaha daran ee crona isla markas waa in shaqsi waliba uu u istaaga xalada guud ee c/fimaadka bulshada ku nool dalka swedan.